Ikhosi yaseMicrostran: uyilo lolwakhiwo-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yaseMicrostran: uyilo lolwakhiwo
Ikhosi yaseMicrostran: uyilo lolwakhiwo
I-AulaGEO, izisa le khosi intsha ijolise kuyilo lwezixhobo, kusetyenziswa isoftware yeMicrostran, evela kwiiNkqubo zeBentley. Ikhosi ibandakanya ukufundiswa kwetiyori, ukusetyenziswa kwemithwalo kunye nokuveliswa kweziphumo.
Intshayelelo yeMicrostran: isishwankathelo
Iibars zezixhobo ezahlukeneyo zeMicrostran kunye nemisebenzi
Imodeli elula yomqadi
Imodeli elula yekholamu
Imodeli elula yomkhonto
Umzekelo wesakhelo sePortal
Yenza i-SFD kunye ne-BMD
Iibhola zezixhobo ezahlukeneyo kunye nemisebenzi.
Imodeli yesakhelo se3D
Ukuprinta nokwenza ingxelo
IMicrostran sisoftware esetyenziswa ngokubanzi eAsia kwiiprojekthi zolwakhiwo.
Kukhethwa abafundi abaneengcinga ezisisiseko zobunjineli
Ikhosi yeAdobe Indesign
Isingeniso kwikhosi yoyilo usebenzisa ibhendi yomsebenzi we-Ansys